Nei ndisingakwanise kuwana maemail aidiwa kana zvimwe zvinhu mune yakagadziriswa PST faira? - DataNumen
Dzimwe nguva maemail aunoda nezvimwe zvinhu zvinowaniswa asi mazita avo anochinjwa kana kuendeswa kune mamwe maforodha akadai se "Kuwanikwazve_Groupxxx", nekuda kwehuori hwefaira. Saka kuti uone kana maemail kana zvimwe zvinhu zvadzorerwa, unogona kushandisa zvinyorwa zveemail kana zvimwe zvinhu zvechinhu, kuzvitsvaga.
Kana iri dhairekitori, kana iwe uchiri kurangarira mamwe emaimeri mune iyo dhairekitori, ipapo unogona kutsvaga maemail aya kuburikidza nezvidzidzo zvavo, wozobva pamhedzisiro yekutsvaga, tsvaga yako yaunoda dhairekodhi.
tsvaga maemail, pst
Ini ndinowana "Kubva mundangariro" kukanganisa kana ndichigadzira PST /OST faira. Zvekuita?Kune zvimwe zvinhu zvisingadiwe mufaera PST faira. Ungavabvisa sei?